မောငျ(စှယျစုံကမျြး): February 2016
i_Phone သမားတွေမှာ အင်တာနက် အဖွင့်အပိတ်ကို အလွယ်ထားနည်း
Setting ထဲ သွားသွားဖွင့်ရတာ အလုပ်ရှုပ်နေတာ ကြာပြီ အခုဒီနည်းက
အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် အသုံးလိုသူများ အောက်မှာရှင်းပြထားပါတယ်
Cydia ထဲကနေ CCSeting ဆိုတာကို ရိုက်ရှာပြီး အင်စတောလုပ်လိုက်
ပြီးရင် ဖုန်း Setting ထဲမှာ ရောက်လာပြီဆိုရင်ဖွင့်လိုက်ပါ
Toggles per line ထဲဝင်ပြီး 4-5-6 ကြိုက်တာရွေးလိုက်ပါ
ဒီဟာကိုအသုံးပြုဖို့BigBoss Repo ရှိရပါမယ်
မရှိရင် Cydia ဖွင့် ==> More Package Sources ထဲဝင်လိုက်
ပြီးရင် install လုပ်လိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်
Author Maungssk at 9:12:00 AM3မှတ်ချက်
i-Phone အတုအစစ် ဘယ်လိုခွဲမလဲ သိချင်သောသူများအတွက်
အခုတလော Iphone တွေကိုလိမ်ပြီးရောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက တော်တော်ဆိုးရွားစွာ ကြားနေကြရမှာပါ။ လာရောင်းတိုင်းလဲ ၀ယ်လိုက်မိကြတဲ့သူတွေတော်တော်များများကို တွေ့နေရတယ်။ နောက်မှ အလိမ်ခံရမှန်းသိပြီး ဒေါသဖြစ်နေကြရတယ်။ အဲလိုမဖြစ်ရအောင် ကျတော်အလွယ်ကူဆုံး အတု / အစစ် ခွဲခြားနည်းလေး ကျတော်သိသလောက် ပြောပြပေးပါမယ်။ အဲဒီလိုလာရောင်းလာပြီဆိုရင် အရင်ဆုံးသေချာစစ်ပါ။ အပေါ်ယံကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဖွဲ့စည်းတ်ာဆောက်ပုံ ပာာ ဘာမှကွဲပြားခြင်းမရှိဘူးလို့ထင်ရပါမယ်။ တစ်ခုသတိထားပြီးကြည့် ကြည့်ပါ။ iphone အစစ်မှာ Sensor အပေါက်မှာ အနည်းငယ်ကွဲပြားနေပါလိမ့်မယ်။ iphone အစစ်ထက်ကို တစ်ပေါက်နည်းနေတက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းပာာ iphone အစစ်တစ်လုံးမရှိရင် ဘယ်လိုခွဲခြားရမလဲ လို့မေးလို့ရပါတယ်။ ပာုတ်ပါတယ် … ဒီနည်းက ခွဲခြားဖို့အတွက် ခက်ခဲမှု့ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်နည်း အလွယ်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်။ setting ထဲကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် icloud ထဲသာဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ iphone အစစ်ပာာ Apple ID account တစ်ခုထဲသာ ၀င်နိုင်ရန် တောင်းဆိုထားပါမယ်။ iphone အတုပာာတော့ အဲလိုမပာုတ်ပဲ Apple ID account တောင်းထားခြင်းမရှိပဲ Twitter / Gmail စတဲ့ account တွေသာ တောင်းဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ iphone အစစ် နဲ့ အတုပာာ ခွဲခြားရလွယ်ကူသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကြုံတွေ့ဖူးတာလေးကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်တာကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာ မှားယွင်းမှု့ရှိခဲ့ပါက နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။
Credit - -http://mrthanaung.blogspot.com/2015/06/iphone-clone-iphone.html#sthash.7bNTDNe4.dpuf
အခုတလော Iphone တွေကိုလိမ်ပြီးရောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက တော်တော်ဆိုးရွားစွာ ကြားနေကြရမှာပါ။ လာရောင်းတိုင်းလဲ ၀ယ်လိုက်မိကြတဲ့သူတွေတော်တော်များများကို တွေ့နေရတယ်။ နောက်မှ အလိမ်ခံရမှန်းသိပြီး ဒေါသဖြစ်နေကြရတယ်။ အဲလိုမဖြစ်ရအောင် ကျတော်အလွယ်ကူဆုံး အတု / အစစ် ခွဲခြားနည်းလေး ကျတော်သိသလောက် ပြောပြပေးပါမယ်။ အဲဒီလိုလာရောင်းလာပြီဆိုရင် အရင်ဆုံးသေချာစစ်ပါ။ အပေါ်ယံကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဖွဲ့စည်းတ်ာဆောက်ပုံ ပာာ ဘာမှကွဲပြားခြင်းမရှိဘူးလို့ထင်ရပါမယ်။ တစ်ခုသတိထားပြီးကြည့် ကြည့်ပါ။ iphone အစစ်မှာ Sensor အပေါက်မှာ အနည်းငယ်ကွဲပြားနေပါလိမ့်မယ်။ iphone အစစ်ထက်ကို တစ်ပေါက်နည်းနေတက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းပာာ iphone အစစ်တစ်လုံးမရှိရင် ဘယ်လိုခွဲခြားရမလဲ လို့မေးလို့ရပါတယ်။ ပာုတ်ပါတယ် … ဒီနည်းက ခွဲခြားဖို့အတွက် ခက်ခဲမှု့ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်နည်း အလွယ်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်။ setting ထဲကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် icloud ထဲသာဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ iphone အစစ်ပာာ Apple ID account တစ်ခုထဲသာ ၀င်နိုင်ရန် တောင်းဆိုထားပါမယ်။ iphone အတုပာာတော့ အဲလိုမပာုတ်ပဲ Apple ID account တောင်းထားခြင်းမရှိပဲ Twitter / Gmail စတဲ့ account တွေသာ တောင်းဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ iphone အစစ် နဲ့ အတုပာာ ခွဲခြားရလွယ်ကူသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကြုံတွေ့ဖူးတာလေးကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်တာကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာ မှားယွင်းမှု့ရှိခဲ့ပါက တားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။ - See more at: http://mrthanaung.blogspot.com/2015/06/iphone-clone-iphone.html#sthash.7bNTDNe4.dpuf
နောက်တစ်နည်း ဒီလိုလည်း စစ်နိုင်ပါသေးတယ်
If you want to check the serial number, you can:
Then go to "General".
Scroll down and check "Serial Number".
အသေးစိတ်ဖတ်ရန် - http://visihow.com/Determine_Fake_vs._Real_Iphone
ဖုန်းထဲကနေ ဆော့ဝဲတွေ အလွယ်တကူ ဒေါင်းလုပ်ယူချင်ရင် ဒီဆော့ဝဲထည့်ပါ
Root လုပ်နည်း နဲ့ မြန်မာစာထည့်နည်း
Android Phone အတွက် မွန်ဖောင့်
Android ဖုန်း မြန်မာစာထည့်နည်း
Lenovo ဖုန်း မြန်မာစာ ထည့်နည်း
Nokia ဖုန်း မြန်မာစာ ထည့်နည်း
မွန်စာ နဲ့မွန် Keboard ထည့်သွင်းနည်း
ရှမ်း Font နဲ့ ရှမ်း Keyboard
Andriod Error Solution (4)
Android Phone အတွက် မွန်ဖောင့် (1)
Android နည်းပညာများ (18)
Android ဖုန်း မြန်မာစာထည့်နည်း (13)
Android ဖုန်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ (20)
Android ဖုန်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ (47)
Converter APK (1)
Design ဆွဲတဲ့ ဆော့ဝဲများ (3)
Firmware တင်နည်း (9)
Huawei မြန်မာစာထည့်နည်း (4)
Mobile Chating and Video Call (3)
MP3 cutter for android (2)
Online TV Player (9)
Phone Battery ပြဿနာ (9)
Phone ကနေ Download ယူနည်း (13)
Phone နဲ့ သက်ဆိုင်သော (18)
Phone မျိုးစုံအတွက် Games (68)
Phone မျိုးအတွက် Firmware တင်နည်း (5)
Phone မှာ ရှိနေသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ (1)
Phone အင်တာနက်လိုင်း မြင့်နည်း (3)
Phone အတွက် Photoshop ဆော့ဝဲ (35)
Phone အတွက် Video Call ဆော့ဝဲ (1)
Phone အတွက် Wallpaper (26)
Phone အတွက်မြန်မာဖောင့် (21)
Phone အလန်းဇယား Rington (10)
Root Tool (5)
Root လုပ်နည်း (17)
Speed up apk (2)
Un-Root ပြုလုပ်နည်း (2)
Useful Apk (25)
ဗုဒ္ဓ တရား ဓမ္မဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ (10)
မြန်မာဖောင့်မမှန်ရင် ဖြေရှင်းနည်း (11)
Apple ( iTunes )ID ဖွင့်နည်း
i-Phone (ios) များ Version မြင့်နည်း
i-Phone ကနေ Wifi ထပ်ဆင့်လွှင့်နည်း
i-Phone အတွက် Chatting ဆော့ဝဲများ
i-Phone အတွက် Fighting Game
I-phone အတွက် Iblacklist ဆော့ဝဲ
i-Phone အတွက် ID ဖွင့်နည်း
i-Phone အတွက် PhotoShop ဆော့ဝဲ
i-Phone အတွက် အဘိဓာန်
i-Phone အတွက် မြန်မာပြက္ခဒိန်
ios Firmware များဒေါင်းရန်
ios Version မြင့်နည်း
Iphone Carrier စိတ်ကြိုက်ပြောင်းနည်း
Iphone icon တွေကို အောက်ကဘားမှာထားမယ်
Iphone ကိုင် သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Yangon Buses App လေးပါ
Iphone ကနေ ဇယ်တောက်ဂိမ်း
Iphone တွက် iDhamma app
iphone နဲ့ ဆိုင်သော
Iphone အတွက် AudioNote
Iphone အတွက် Dhama Quote App
Iphone အတွက် H TV Myanmar ဆော့ဝဲ
Iphone အတွက် MM-Topup
Iphone အတွက် Myanmar eRadio လေးပါ
Iphone အတွက် Myanmar Love Poems App
Iphone အတွက် Ringtone ဖြတ်နည်း
Iphone အတွက် Slider Pro
Iphone အတွက် Tank ဂိမ်း
Iphone အတွက် ငတက်ပြားဂိမ်း
Iphone အတွက် မာရီရိုဂိမ်း
Iphone အတွက် အိမ်ခြံမြေ App
Safari မှာ မြန်မာစာထည့်နည်း
Facebook နှင့်ဆိုင်သော နည်းပညာများ
Acc :Block လုပ်နည်း၊ဖြုတ်နည်း
Facebook အကောင့် ဖွင့်နည်း
Photo Comment ပေးနည်း
ကိုယ့် Profile ဘယ်သူအကြည့်များလဲစစ်နည်း
Speaking စာအုပ်များ (13)
Wifi Hacking နည်းလမ်းစာအုပ် (5)
နည်းပညာ စာအုပ်များ (90)
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) လမ်းညွှန် (3)
Author Maungssk at 9:10:00 AM 1 မှတ်ချက်